Ukulinda sekuphelile, i-Samsung Galaxy S7 manje isemthethweni | Izindaba zamagajethi
Ngemuva kwezinyanga nezinyanga amahemuhemu ngaye i-Galaxy S7 entsha Emizuzwini embalwa edlule abakwaSamsung bayethule ngokusemthethweni ngaphakathi kohlaka lweMobile World Congress eqale namuhla eBarcelona. Njengoba besilindele, izinhlobo ezimbili ze-Galaxy S7 zizongena emakethe ezinsukwini ezimbalwa ezizayo, esingazibhapathiza njengokujwayelekile ne-Edge, ngesikrini esinemiphetho egobile.
Ngenxa yala mahemuhemu nokuvuza okuningi besivele sazi ngezinga elikhulu le nsimbi entsha ye-Samsung, engakaze imangaze muntu. Futhi izongena emakethe ngaphandle kwezindaba ezimnandi, ekubeni inguqulo ene-vitaminized ye-Galaxy S6. Vele, sizothola izindaba ezithokozisayo, kepha hhayi ezahlukile.
Lezi yizo izici eziyinhloko nokucaciswa kwe-Samsung Galaxy S7 entsha;
Ubukhulu: 142.4 x 69.6 x 7.9 mm
Isisindo: 152 amagremu
Isikrini: 5,1 intshi SuperAMOLED ngesisombululo se-QuadHD
Processor: Ama-Exynos 8890 4 cores kuma-2.3 GHz + 4 cores ku-1.66 GHz
Imemori yangaphakathi: 32 GB, 64 GB noma i-128 GB. Zonke izinhlobo zizonwetshwa ngekhadi le-MicroSD
Ikhamera enkulu eyi-12 megapixel. I-pixel engu-1.4 um. Ubuchwepheshe be-Dual Pixel
Ibhethri: 3000 mAh ngokushaja okusheshayo nokungenantambo
Ukupholisa ngohlelo lwamanzi
Uhlelo olusebenzayo lwe-Android 6.0 Marshmallow ngeTouchwiz
Ukuxhumana: NFC, Bluetooth, LTE Cat 5, WiFi
Abanye: I-Dual SIM, i-IP 68
Ngokubuka kwalezi zici nokucaciswa, akukho kungabaza ukuthi sibhekene ne-terminal ephezulu nokuthi ngaphandle kokungabaza kuzoba ngesinye sezikhombo ezinhle zonyaka ozayo.
1 I-Galaxy S7 noma ukuvuselelwa okunengqondo kwe-Galaxy S6
2 Idizayini, okuningi okufanayo
3 Ikhamera ye-Galaxy, iphuzu layo eliqinile
4 Ibhethri nesoftware
I-Galaxy S7 noma ukuvuselelwa okunengqondo kwe-Galaxy S6
Into ephawuleka kakhulu ngale Galaxy S7 ukuthi kubuye kwatholakala ukuthi kungenzeka kwandiswe isitoreji sangaphakathi ngekhadi le-MicroSD, nezinye izindaba ezingaphawuleki kangako. Singasho ukuthi le flagship entsha ye-Samsung ingukuziphendukela okunengqondo kwe-Galaxy S6, yize ishiya ezinye izinto ebezilindelwe endleleni.
Isikrini sizohlala siyisinqumo se-QuadHD iSuperAmoled, yize kulokhu kuzothanda ukucindezela, kulandela indlela ethathwe yi-Apple ngeTouch Force yayo.
Ngaphakathi kwesiginali sithola iprosesa I-Exynos 8890, eyenziwe yi-Samsung, futhi lokho kusekelwa yi- I-4GB RAM Izosinikeza amandla amakhulu kakhulu okwenza umsebenzi ngaphandle kwenkinga. Kokubili iprosesa ne-RAM ngokungangabazeki ukuvela okunengqondo kwe-Galaxy S6.
Vele, ukugwema izinkinga esesivele sizibonile kwamanye amadivayisi abizwa ngokuthi aphezulu, abakwaSamsung banqume ukufaka uhlelo lokupholisa uketshezi oluzovumela le Galaxy S7 ukuthi ishise ngokweqile lapho siyikhama ngokugcwele.
Idizayini, okuningi okufanayo
Baningi abakade bekusho lokho le Samsung Galaxy S7 icishe ifane neyandulelayoIsizathu sokuthi azishodi ngoba ezingeni lobuhle umehluko bumbalwa kakhulu. Mhlawumbe i-hump yekhamera ingenye yezinto ezimbalwa eziguquliwe kanye nesikhala sekhadi le-MicroSD. Olunye ushintsho, ngokungangabazeki olungasho lutho yimibala lapho le Galaxy S7 entsha izotholakala khona.
Akungabazeki ukuthi ngaphakathi le smartphone entsha iyisilo sangempela, kepha ngaphandle izindaba azikho nhlobo. Mhlawumbe ngalesi sikhathi kufanele siyeke ukucabanga ukuthi sifuna yini ukuba ne-Galaxy entsha minyaka yonke, efana ncamashi naleyo eyedlule ezingeni lokuklama, yize inamandla amakhulu noma uma sifuna izinguquko ngokwakhiwa, mhlawumbe silahlekelwe ngamandla athile.
Ikhamera ye-Galaxy, iphuzu layo eliqinile
Okunye kokuthuthuka okukhulu esingakuthola kwi-Galaxy S7 kugxile kwikhamera futhi kungukuthi abaseNingizimu Korea kubukeka sengathi bathathe isinqumo sokuyishiya impi ye-megapixel, ebingabayisi ndawo, ukugxila ekwakheni ikhamera ehlukile ene- “just” inzwa eyi-12 megapixel.
Ngenkathi ulinde ukukwazi ukuhlola ikhamera ye-Galaxy S7, bonke labo abakwazile ukuthatha izithombe zokuqala nayo, sebevele bakhuluma ngokungajwayelekile. Usayizi omusha we-pixel kusuka ku-1,12 um kuye ku-1,4, okunikela ngokukhanya okuphezulu okungu-95% nokuvulwa kwefayela le- irekhodi f / 1.7 inzwa baqinisekisa izithombe ezisezingeni eliphakeme.
Ngaphezu kwalokho, abakwaSamsung bakwazile ukuthuthukisa kakhulu ukugxila kwekhamera, eye yashesha futhi ngaphezu kwakho konke okuqondile, ngenxa yobuchwepheshe obaziwa nge-pixel embaxambili.
Okwamanje imiphumela ekhonjiswe yiSamsung iyathandeka, noma ukuyivivinya ngezinga layo elifanele kufanele siyizame bese siyikhama ngokugcwele. Ake siveze okwesikhashana ukuthi le khamera ifinyelele kulokho ebesikulindele nokuthi ayisaphumi ngemuva, ngalolo hlobo lwe-hump obekufanele sihlupheke kulo i-Galaxy S6.
Ngokuphathelene nebhethri, elinye lamaphuzu abuthakathaka amadivayisi eselula amaningi akhona namuhla emakethe, AbakwaSamsung bafake le Galaxy S7 ngebhethri elingu-3.000 mAh. Lokhu nakanjani kufanele kusinikeze ukuzimela okukhulu kunalokho esikunikezwe yi-Galaxy S6. Ngaphezu kwalokho, iprosesa entsha, ihlanganiswe nesoftware entsha, kufanele isebenze kangcono kakhulu.
Isoftware yale Samsung flagship entsha iyi I-Android 6.0, njengoba sazi isikhathi eside futhi sisekelwa yiTouchwiz entsha esisinikeza izindaba ezithokozisayo. Yize sizozibukeza ngokujulile ezinsukwini ezizayo, ngokwesibonelo sizobona okusha okwenzekile kwamarowu onqenqemeni lwe-Galaxy S7, okungangabazeki ukuthi yizindaba ezinhle ngoba kuze kube manje isikrini esigobekile salesi siginali besingasizi ngalutho.
Njengoba kumenyezelwe yi-Samsung, i-Galaxy S7 entsha, kuzo zombili izinhlobo, izotholakala kusuka ngoMashi 11 olandelayo, yize usungakwazi ukubhuka kwetheminali ukuyithola ngalo lolo suku.
Intengo esemthethweni ye-Galaxy S7 izoba 719 euros, ngenkathi inguquko onqenqemeni izokhuphukela kuma-euro ayi-819.
Ucabangani ngale nsimu entsha ye-Samsung Galaxy S7 ne-Galaxy S7?.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ukulinda sekuphelile, i-Samsung Galaxy S7 manje isemthethweni
I-Samsung Galaxy S7 vs Samsung Galaxy S6, ifana kakhulu?